Kungeniswe ezweni ngenxa iminyaka engamakhulu amathathu namashumi kuphela edlule, amazambane ngokushesha waba umholi, ngokuba "isinkwa sesibili" bendabuko cuisine Russian. Lolu amazing nokuyizigaxa efana abalimi, okuholela njalo zifunana yemifino ephelele.
Lapho kutholakala ukuthi umuntu onjalo, esasivela muva, tshela encwadi yethu. Lokhu amazambane izinhlobo Hercules noma iNdodana, ukungafani egameni layo ngenxa yokuthi isivuno ukuhlolwa ibanga ingakamiswa ngaphansi futhi, ngokufanelekile, ngeke ibhaliswe State Register of the Russian Federation. Nokho, isikhule ngempumelelo abalimi kanye balimi, wakwazi ukuthola okuningi abasekeli kanye abalandeli abaqotho. Ake sithole ukuthi kwakungani ngokuningiliziwe, okuyinto iNdodana amazambane.
Incazelo izici ezihlukahlukene
Son - umkhiqizo kazwelonke Ukukhetha srednepozdnih yokuvuthwa. It libhekene okusezingeni eliphezulu (60-70 cm), ezihlabayo iqotho ngokulinganisela ngobuningi patula. Okushukunyiswa ezimboziwe aluhlaza amahlamvu elula nge onqenqemeni inamagquma, okuyinto zigcinwa amahlumela kufike ukuvuna.
Ukuphakama ehlathini kuncike degree inhlabathi okuzala: konemimoya izakhi, futhi isishukumisela ivolumu enkulu mass oluhlaza. izimbali kakhulu iqala maphakathi no-ihlobo: white, izimbali kunalokho enkulu, bahlangana beaters compact, abune izinsuku 2-4. Amajikijolo kwakheka kancane.
Uhlelo impande iyakhiwa, ngamunye uyakwazi ukwakha isihlahla 8-15 notch amazambane, futhi ezindaweni evundile - kuze kube izicucu 25, kanye okungajwayelekile isici izinhlawulo kanye nezilimo eziyizigaxa cishe akwenzeki.
amazambane libhekene iNdodana (incazelo grade, izithombe, izibuyekezo uqinisekise lesi) wekugcina, nezilimo eziyizigaxa ntathu ukufinyelela quba 75 kuya 350 g okusaqanda futhi flat, inani elincane izimbobo ezicashile, ngokuvamile bagxila phezulu tuber, Mesh, obucayi alube pink ikhasi - nakhu ukuthi kakusikho ukusoka okusobala enyameni ubukeka entsha amazambane izinhlobo.
Nezilimo eziyizigaxa zitholakala ngaphakathi endaweni engaba 20 kuya 40 cm kusukela maphakathi ehlathini ngesikhathi 8 kuya ku-30 cm (kuye ngokuthi isimo somhlabathi) ukujula. Inyama yabo egqamile-white, obukhulu.
INdodana Amazambane, incazelo ezihlukahlukene, izithombe kanye izici ungabona kulesi sihloko, idume yokusebenza kwalo ngezindlela eziningi - kungaba kudingeka sihlakulelwe Ezindaweni ezahlukene zezulu. Kuyinto ukumelana izinguquko okungazelelwe sezulu, ngaphandle esilingweni ithwala snap esifushane abandayo, ukushisa kakhulu, umswakama ngokweqile noma ukuntuleka kwamanzi.
Ogorodniki, ukuhlangabezana grade, uqaphele elincomekayo ukunambitheka nezilimo eziyizigaxa, esizwa nokuvuthwa kamuva futhi ngokwesilinganiso isitashi wokuqukethwe (13.5-14%).
Sonny - etafuleni Ephakathi-ebangeni. Kusukela amila ukuze yokuvuthwa egcwele nezilimo eziyizigaxa (kuncike esifundeni) kwelula izinyanga okungenani 4. Kuchazwe grade yona yakwazi kanjani ukuyeka ukuba 7.8 kg amazambane ehlathini ngalinye. Nalapha futhi, ezingxenyeni ezehlukene zezwe isivuno izibalo nemikhuba yazo ihluke kakhulu, kodwa, nahlulele by impendulo, iqiniso liwukuthi ukuthi buyaphikiswa endaweni zonke siphakeme ngokwanele.
Ayikwazi kuqashelwe ukumelana kakhulu izifo, okuyinto kuyahluka amazambane iNdodana. Incazelo ezihlukahlukene, isithombe, ukubuyekezwa ukugcizelela isici ukuphikisana kwakhe umdlavuza amazambane, nematode, bola manzi, uqweqwe. Nokho, nahlulele yi amazwana, ngezansana nje kwenqaba, ukumelana izitshalo lohlupho okulimaza sekwephuzile.
Ukwengeza izinzuzo efakwe ohlwini nokonga izindleko njengoba imbewu, ngokungafani kuya izinhlobo eziningi amazambane, hhayi ukungenwa ukonakala futhi ayidingi izibuyekezo njalo. Ngaphezu kwalokho umhlaba abanikazi ngokuvamile ungasebenzisi tuber futhi izingxenye zalo zitholakala kuzo amehlo.
Mayelana nodaba transgenic
Phakathi amazwana ukubukwa isikhala Inthanethi zitholakala namuhla ukuthi inhlobo Hercules, noma indodana - izakhi. Nokho, futhi uqinisekise noma ukuphika lokhu kuze akekho owakwazi.
Okwamanje, akunakwenzeka ukuba ucacise indlela iqiniso noma amanga ngalokhu kugomela, singakwazi ngethemba nje ukuthi isimo ngeke ukucacisa lokuhlonishwa we State Register of izinhlobo Russian Federation. Sisanda usho iqiniso futhi ukwamukela njengokuyiqiniso nokuntuleka okunemibandela.
Futhi izinzuzo grade indodana, nahlulele by izimpendulo eziningi, zihlanganisa lezi zinto ezilandelayo:
Ikhono ezikhula nezimo ezahlukene zezulu.
Ukumelana bendabuko izifo amazambane.
umzamo Minimum ezikhulayo.
Lowo-dimensionality kanye ukungabikho off-grade nezilimo eziyizigaxa.
Ukufaneleka yokugcina yesikhathi eside.
Versatility ebangeni palatability kakhulu.
Abalimi abanolwazi ukukhuluma kanjani ukutshala amazambane indodana. Incazelo ezihlukahlukene, isithombe, ukubuyekezwa ukubonisa lula enviable futhi ikilasi umnotho. Lungiselela inoculum kanje: manganese zangaphambi ezihlalayo nokuyizigaxa imila Imi ehlanzekile ngommese obukhali ibe yizicucwana, ngasinye zazo has 2-3 efihlekile. Izingxenye kancane omisiwe elangeni, futhi umlotha oluyimpuphu ukugqashuka indlela checkrow lalihlehliswa 10-15 cm nokugcina ibanga phakathi sezihlahla 70 cm. Kusukela 10-14 2-3 nezilimo eziyizigaxa etholwe ezihlabayo egcwele.
Itulo bemba ngaphambi kokutshala, lenzelwa ku amaqula iyinhlanganisela sokudla humus futhi izinkuni umlotha. INdodana isitshalo amazambane kusenesikhathi ngo-Ephreli noma ekuqaleni kuka-May, lapho umswakama inhlabathi ngangokunokwenzeka, kodwa namanje ngamakhasimende isifunda izici sezulu. Ngakho, ezindaweni ezibandayo entwasahlobo amazambane itshalwe ngesinye, kodwa futhi ubukhulu nezilimo eziyizigaxa izoke kancane.
Okokuqala sekukhona ukhula kufanele usike, futhi inhlabathi ngaphansi otshanini kancane ukuze kuhlukaniswe, ukuqikelela ukuthi kulimaze ezimpandeni. Lapho ehlathini luyokhula futhi ngeke yayenza isithunzi, ukhula ngeke ubuhlungu.
Ukuze kwandiswe umkhiqizo, kubalulekile ukuba ondle izikhathi 2-3 ephelele isitshalo Umanyolo eziyinkimbinkimbi (isib, "Kemira", "FOP"). Ezindaweni ezinezinga lokushisa elithokomele ukucelela akudingekile, ehlobo ezomile ukuchitha esalisekela ezimbili ngesikhathi ukuthambisa. Isici nice isigaba, nahlulele kusukela izimpendulo kukhona Ukuhlakula ukhula ongazikhetha futhi hilling. Kodwa mulching ngotshani noma utshani obugundiwe - indlela ephumelela kakhulu ukuze kwandiswe umkhiqizo ngokulondoloza amazinga evamile umswakama. Siyaphinda ukuthi indodana grade akuyona othambekele ukonakala futhi esibonakala ngokuqina amasosha omzimba kakhulu, ngakho imbewu kungenziwa kukhethwe ngonyaka.
Isungulwe phezu isitoreji amazambane akudingi bulkhead kanye nokwenqatshwa okwalandela, asele cishe ngokuphelele. Hhayi kuncike elibi ngisho ezilimele uma ukumba nezilimo eziyizigaxa, basuke egcinwe kahle.
Ukuba yizinhlobonhlobo ezihlukahlukene ubabonisa ukusebenzisa kwayo cuisine Russian.
Lapho ukupheka ukuthosa, e casseroles namazambane okhamiwe wahlanganiswa - zonke izitsha ngokulinganayo esihlwabusayo amazambane indodana. Incazelo ezihlukahlukene, izithombe, izibuyekezo, ukuqinisekisa hhayi kuphela kalula ukutshalwa, kodwa futhi ukunambitheka omuhle kakhulu umkhiqizo, ukuqinisekisile umkhuba.
Kamuva ukukhula onikela tuber buthelela isamba esikhulu eyigugu izakhi compounds namavithamini. A isitashi okuqukethwe ongaphakeme akuvumeli abilisiwe elithambile, esaziwa ukuma nombala omhlophe, ephawula ke njengoba bemelela amazambane glastit iNdodana incazelo ezihlukahlukene.
Inani (yeningi ngokwanele), lapho namuhla ungakwazi ukuthenga imbewu, elitholakalayo ikakhulukazi abalimi kanye balimi-nayizimfundamakhwela ku "Avito". 30 Kukhona angathengwa $ 100 imbewu noma inzalo nezilimo eziyizigaxa reserve, kuwufanele ruble 400 ngalinye 0.5 kg.
Indlela tie imivini ukwandisa umkhiqizo walo
Kungani amacembe awohloka houseplants
Izihlahlana Astra: izinhlobo ethandwa kakhulu, ukutshalwa abazinakekela
Pike. Ukupheka for pickling
Itshe Quartz emaqaqasini
Lapho kufika Indian ehlobo futhi kuyini?